ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5အမှားတွေယောက်ျားဒါကဆက်ဆံရေးပျက်စီးနိုင်သ Make
အားဖြင့် Lisa ကို Reynolds
5 အမှားတွေယောက်ျားဒါကဆက်ဆံရေးပျက်စီးနိုင်သ Make
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 15 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ဤလောကရှိလူများ၏အများစုကြင်နာများမှာ, ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးတွင်သူတို့ကို dissing မရှိလမ်းအတွက်ကြီးမားသောစိတ်နှလုံးကိုနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်လူသည်. ဒါဟာအကြောင်း 5% သူအမျိုးအစားထဲသို့ကျကြပါဘူး. သောပေမယ့် 5% လူကောင်းတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်ရှိပါတယ်, ရည်းစားပစ္စည်းကိုကိုယ့်မကောငျးသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်သည်သူတို့အဘို့အရာခပ်သိမ်းလုပ်ဖို့နောက်ပြန်ကျော်လဲကျမညျ့သူသေးတကိုတွေ့ကြပြီမဟုတ်. ဤဆောင်းပါး၌ငါ၌ဤအကြောင်းနညျးလမျးငါးခုရေးသားဖို့သွားပေါ့ 5% ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးနိုင်.
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး cheats သောအခါအကြောင်းအရာသူတို့ထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိသောသူတို့သည်အတူဖြစ်ကြ၏လူတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌နေကြသည်မဟုတ်ကြောင်း. ယောက်ျားတစ်ယောက်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်တဲ့အခါလူတိုင်းနှိုင်းယှဉ်လျှင် pales သောကွောငျ့သူရိုးရိုးသူတို့အပျေါမှာခိုးမည်မဟုတ်. ဒါကသူမကြည့်ဘူးနှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကကောင်းသော-ရှာဖွေနေကြောင်းမမွငျနိုငျပြောမဖြစ်. ငါငါတို့သည်မပွုခဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြ၏သင်တို့မူကား, မေတ္တာ၌အခါခြားနားချက်အခါသင်ကအပေါ်ပြုမူဘူးကပြောသည်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်မုသာစကားကိုမည်ဖြစ်ကြောင်းထင်. ယောက်ျားတစ်ယောက် cheats အခါ, ဒါကြောင့်သူကသူ့အဖော်နှင့်အတူမေတ္တာ၌မကြောင်းပြသထားတယ်နှင့်စုံတွဲများတွေအများကြီးနောက်ကျောကနေလာမနိုငျသောယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကိုဖန်တီးပေး.
ရိုင်းစိုင်းခဲ့တာတစ်ဦးအေးမြကြည့်ရှုမဟုတ်ပါဘူး. သို့သော်ဝမ်းနည်းစွာထိုသို့ထင်သောသူယောက်ျားတွေရှိပါတယ်. တချို့ကပင်ကအေးမြင်ထင်နှင့် “ဘယ်လိုလူကိုပြုမူသင့်တယ်” လူအပေါင်းတို့ကအမှိုကျ. သူကပန်းပွင့်နှင့်အတူတိုင်းငါးမိနစ်ပြေးခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကောင်းတဲ့ဖြစ်တွေအများကြီးယူမထားဘူး. သူတို့နက်ရှိုင်းချတဲ့အားတက်သရောမဟုတ်လျှင်ယောက်ျားတွေအများကြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ဤကဲ့သို့သောပြုမူအဘယ်ကြောင့်ငါနားလည်မယ့်လမ်းအတွက်. လူတွေအများအပြားတပြင်လုံးကိုမကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတူပြုပါပေမယ့်ငါဆက်သွယ်ရေးမှုန်ဝါးရရှိဘယ်မှာသူတို့ကောင်းစွာသူတို့ကိုဆက်ဆံမည်သူတစ်ဦးကောင်းသောစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့မကောင်းတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ချင်နှင့်အကောင်းတစ်ဦးကိုစိတျနှလုံးမကောင်းတဲ့ကောင်လေးအကြားအကြီးအကျယ်ကွာခြားချက်ရှိရဲ့ရှိတယ်လို့ကျနော်ထင်ပါတယ်နှင့် သငျသညျမှရိုင်းစိုင်းသည်နှင့်ရှိသမျှသောအချိန်သင်ကဆင်းသောသူတစ်စုံတစ်ဦး. ငါတကယ်တော့ဒါကြောင့်တစ်ဦးအစွမ်းသတ္တိကိုဖွင့်သောအခါကြင်နာမှုတခါတရံအားနည်းခြင်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ထင်နှင့်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံရေး၏အများဆုံးနှစ်ခုလုံးကလူကောင်းစွာအသီးအသီးအခြားပြုမူဆက်ဆံကြသည်ဘယ်မှာ.
သူတို့ရဲ့ Partner Hits
ဤဆောင်းပါးတွင်ယောက်ျားတွေအကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါသည်သူတို့၏မိတ်ဖက်ရိုက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဒါပေမဲ့ဒီအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်. ဤအပိုငျးရေးသားတာပါ, အထဲတွင်ရှိသမျှသောအပိုင်းများကဲ့သို့, အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်းဒါငါသာယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက် hit ဟုအဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်ရယ်ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးဖို့မအမှုအရာမှလျှောက်ထားနိုင်. ဒါကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်လုပ်နိုင်တဲ့ ugliest အရာရဲ့ကျိန်းသေတိုးတက်နေတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုရပ်တန့်မယ်လို့နှင့်ကျိန်းသေကြောင့်ရပ်တန့်သင့်သောကြောင့်, ငါသည်ဤအပါအဝင်ပေါ့. သူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်သငျသညျကိုထိခိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမဆိုနေပါစေသင်သည်ထိုသူတို့ပတ်လည်မှာသငျသညျပြောဆိုရန်ကိုချစ်ဘယ်လောက်ခွင့်ပြုမနေပါနဲ့.
သငျ၏တပ်ဦးခုနှစ်တွင် Else ကိုလူတိုင်းထားပါ
သင်တစ်ဦးရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်တဲ့အခါ, သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်. သူတို့ကသူတို့ရဲ့မိသားစုကိုချပြီးခံရဖို့ထင်ကြသည်မဟုတ်, မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ, သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌လူတိုင်းရင်းသင့်ကျော်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီး. သင့်ရဲ့အခြမ်းတွင်သင်သည်ဖြစ်နိုင်သူတို့ရှေးခယျြဖို့ရှိသည်ဘယ်မှာအခြေအနေမျိုး၌သူတို့ကိုမထားသင့်ပါဒါပေမဲ့သူတို့မိခင်တူတစ်ခုခုမှလာပါဘူးဆိုရင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုသင်တို့နှင့်အတူအတက်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုလားပါဘူး, သူတို့သည်သင့်ကိုချစ်လျှင်သူတို့ပထမဦးဆုံးသင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုသွင်းထားသင့်ပါတယ်.
ကျနော်တို့ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်သက်သာခြင်းဆုချီးမြှင့်သည့်အခါသိထင်. သူတို့ကတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူမေတ္တာ၌ဖြစ်ရပြီစေခြင်းငှါထိုတရားအားဖြင့်ကျဆင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့သင်တို့အဘို့အအခြေချဒါကြောင့်သူတို့အကြောင်းတူညီတဲ့လမ်းမခံစားရချေနှင့်တစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးသည်အကောင်းတစ်ဦးအခြေခံဘယ်တော့မှဖွင့်. ကျနော်တို့ရှိသမျှကိုရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ရှာဖွေစဉ်းစား, ကရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုလိုသည်သမျှ, သူ့ဟာသူအတွက်မျိုးနားလည်ပေမယ့်အခြားသူတစ်ဦးဦးကိုမြင်အပေါ်နေစဉ်တစ်ဘက်မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသူတို့၏ဘဝများကဲ့သို့ခံစားရတဲ့အခါမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏သူတို့ရဲ့ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်သောတယောက်တည်းဖြစ်မသကဲ့သို့နဲ့လူအများကြီးတစ်စုံတစ်ဦးသည်အဖြေရှင်းတက်အဆုံးသတ် ဒါကြောင့်သူတို့ကိုခစျြလူတစ်ဦးကွာလမ်းလျှောက်ပြီးနောက်သူတို့ပွုပါပွီနိုင်ကြောင်းနှင့်ရေရှည်မှာကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးအမြဲမပျော်ရွှင်အတွက်အဆုံးသတ်ကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်.
အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များ allergi နှင့်ချိန်းတွေ့ခြင်းယှဉ်တွဲရပ်တည်နိုင်ရေးနိုင်သလား?
သင် Dateable Are?
5 တစ်ဦး Wingman ဖြစ်ခြင်း၏စည်းမျဉ်းများ
7 Your Mind မှုတ်တော်မူမည်ဒါက sex အမှန်တရားများ